ယူနိုက်တက် (၂၀၂၁/၂၂) ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံဖြစ်မယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက် ပရိသတ် – the One Sports Journal
ယူနိုက်တက် (၂၀၂၁/၂၂) ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံဖြစ်မယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက် ပရိသတ်
June 2, 2021 author one articles 0
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တစ်ဦးက ချဲလ်ဆီး ချန်ပီယံလိဂ်ဆုဖလားရရှိတာဟာ လာမယ့်ရာသီမှာ ယူနိုက်တက် ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်မယ်ဆိုတာ ဖော်ပြနေတဲ့ နောက်ဆုံးသင်္ကေတဖြစ်တယ်လို့ တွယ်တာစာမျက်နှာမှာတင်ခဲ့ပြီး လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်ဟာ ( ၂၀၁၃ ) ခုနှစ် ဆာအဲလက် ဖာဂူဆန် ထွက်ခွာသွားပြီးကတည်းက ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆု ရယူနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပေမယ့် Ibrahim လို့ အမည်ရတဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင်ကတော့ “( ၂၀၂၁ / ၂၁ ) ဘောလုံးရာသီမှာ ယူနိုက်တက်က ဘာကြောင့် ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံ ဖြစ်ဖို့ရှိနေသလဲ” ဆိုတဲ့ thread တစ်ခုကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ threadမှာ ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
– ကျွန်တော်တို့ ( ၂၀၁၁ / ၁၂ ) မှာ ( ၆-၁ ) ရှုံးပွဲကြုံခဲ့တယ်။ နောက်ရာသီမှာ လိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တယ်။
( ၂၀၂၀ / ၂၁ ) ရာသီမှာလည်း ( ၆-၁ ) ရှုံးပွဲထပ်မံကြုံတွေ့ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ……
– ( ၂၀၁၁ /၁၂ ) တုန်းက ကျွန်တော်တို့ အဲဗာတန်ကို ( ၄-၄ ) သရေကျခဲ့တယ်။
( ၂၀၂၀ / ၂၁ ) မှာလည်း ( ၃-၃ ) သရေကျခဲ့ပါတယ်။
– ( ၂၀၁၁/၁၂ ) မှာ ယူနိုက်တက်က အနီကတ် ( ၁ ) ကြိမ်ပြခံခဲ့ရပါတယ်။
( ၂၀၂၀ /၂၁ ) မှာလည်း အနီကတ် ( ၁ ) ကတ်ပြခံခဲ့ရပါတယ်။
– ( ၂၀၁၁ /၁၂ ) မှာ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု တတိယနေရာရခဲ့ပြီး ယူရိုပါလိဂ်မှာ စပိန်ကလပ်ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။
( ၂၀၂၀ /၂၁ ) မှာလည်း ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု တတိယနေရာ ရခဲ့ပြီး ယူရိုပါလိဂ်မှာ စပိန်ကလပ်ကို ထပ်မံရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။
– ( ၂၀၁၁ / ၁၂ ) မှာ မန်စီးတီး ဂိုးသမားက ‌ရွှေလက်အိတ်ဆုရခဲ့ပါတယ်။
( ၂၀၂၀ / ၂၁ ) မှာလည်း မန်စီးတီးဂိုးသမားက ရွှေလက်အိတ်ရပြန်ပါတယ်။
– ( ၂၀၁၁ / ၁၂ ) မှာ မက်ဆီက လာလီဂါ သွင်းဂိုးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
( ၂၀၂၀ /၂၁ ) မှာလည်း မက်ဆီက လာလီဂါရဲ့ သွင်းဂိုးအမျ‌ားဆုံးပါ ။
– ( ၂၀၁၁ /၁၂ ) မှာ Dijonက လီဂူး ( ၁ )ကနေ တန်းဆင်းခဲ့ရပါတယ်။
( ၂၀၂၀ /၂၁ ) မှာလည်း Dijon ဟာ လီဂူး ( ၁ ) ကနေ တန်းဆင်းရပြန်ပါတယ်။
– ( ၂၀၁၁ /၁၂ ) မှာ ပီအက်ဂျီ ၊ လိုင်ယွန် နှင့် ရက်နက်တို့က လီဂူး( ၁ )ရဲ့ အဆင့် ( ၂ ) ၊ ( ၄ ) နှင့် ( ၆ ) ရရှိပါတယ်။
( ၂၀၂၀/၂၁ ) မှာလည်း ပီအက်ဂျီ ၊ လိုင်ယွန် နှင့် ရက်နက်တို့က လီဂူး( ၁ )ရဲ့ အဆင့် ( ၂ ) ၊ ( ၄ ) နှင့် ( ၆ ) ရရှိပါတယ်။
– အဂွဲရိုးရဲ့ မန်စီးတီး ပထမ နှင့် နောက်ဆုံးရာသီမှာ သူတို့က ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဂွဲရိုး မန်စီးတီးမရောက်ခင်နှစ်မှာ ကျွန်တော်တို့ ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဆို အဂွဲရိုး ထွက်ခွာသွားပြီး နောက်တစ်ရာသီမှာ‌ရော ?
– ချဲလ်ဆီးက ( ၂၀၁၁ /၁၂ ) ဘောလုံးရာသီအလယ်မှာ နည်းပြကို ထုတ်ပယ်ခဲ့တယ်။
( ၂၀၂၀ /၂၁ ) ဘောလုံးရာသီအလယ်မှာလည်း နည်းပြကို ထုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်။
ယူႏိုက္တက္ (၂၀၂၁/၂၂) ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ္ ခ်န္ပီယံျဖစ္မယ္လို႔ဆိုလိုက္တဲ့ ယူႏုိက္တက္ ပရိသတ္
မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ ပရိသတ္တစ္ဦးက ခ်ဲလ္ဆီး ခ်န္ပီယံလိဂ္ဆုဖလားရရွိတာဟာ လာမယ့္ရာသီမွာ ယူႏိုက္တက္ ပရီးမီးယားလိဂ္ခ်န္ပီယံျဖစ္မယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပေနတဲ့ ေနာက္ဆုံးသေကၤတျဖစ္တယ္လို႔ တြယ္တာစာမ်က္ႏွာမွာတင္ခဲ့ၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့ပါတယ္။
ယူႏိုက္တက္ဟာ ( ၂၀၁၃ ) ခုႏွစ္ ဆာအဲလက္ ဖာဂူဆန္ ထြက္ခြာသြားၿပီးကတည္းက ပရီးမီးယားလိဂ္ခ်န္ပီယံဆု ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေပမယ့္ Ibrahim လို႔ အမည္ရတဲ့ အေကာင့္ပိုင္ရွင္ကေတာ့ “( ၂၀၂၁ / ၂၁ ) ေဘာလုံးရာသီမွာ ယူႏိုက္တက္က ဘာေၾကာင့္ ပရီးမီးယားလိဂ္ခ်န္ပီယံ ျဖစ္ဖို႔ရွိေနသလဲ” ဆိုတဲ့ thread တစ္ခုကို မွ်ေဝခဲ့ပါတယ္။
အဆိုပါ threadမွာ ပါဝင္တဲ့အေၾကာင္းအရာတခ်ိဳ႕ကို ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
– ကြၽန္ေတာ္တို႔ ( ၂၀၁၁ / ၁၂ ) မွာ ( ၆-၁ ) ရႈံးပြဲႀကဳံခဲ့တယ္။ ေနာက္ရာသီမွာ လိဂ္ခ်န္ပီယံျဖစ္ခဲ့တယ္။
( ၂၀၂၀ / ၂၁ ) ရာသီမွာလည္း ( ၆-၁ ) ရႈံးပြဲထပ္မံႀကဳံေတြ႕ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ……
– ( ၂၀၁၁ /၁၂ ) တုန္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဲဗာတန္ကို ( ၄-၄ ) သေရက်ခဲ့တယ္။
( ၂၀၂၀ / ၂၁ ) မွာလည္း ( ၃-၃ ) သေရက်ခဲ့ပါတယ္။
– ( ၂၀၁၁/၁၂ ) မွာ ယူႏိုက္တက္က အနီကတ္ ( ၁ ) ႀကိမ္ျပခံခဲ့ရပါတယ္။
( ၂၀၂၀ /၂၁ ) မွာလည္း အနီကတ္ ( ၁ ) ကတ္ျပခံခဲ့ရပါတယ္။
– ( ၂၀၁၁ /၁၂ ) မွာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ အုပ္စု တတိယေနရာရခဲ့ၿပီး ယူ႐ိုပါလိဂ္မွာ စပိန္ကလပ္ကို ရႈံးနိမ့္ခဲ့တယ္။
( ၂၀၂၀ /၂၁ ) မွာလည္း ခ်န္ပီယံလိဂ္ အုပ္စု တတိယေနရာ ရခဲ့ၿပီး ယူ႐ိုပါလိဂ္မွာ စပိန္ကလပ္ကို ထပ္မံရႈံးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။
– ( ၂၀၁၁ / ၁၂ ) မွာ မန္စီးတီး ဂိုးသမားက ‌ေ႐ႊလက္အိတ္ဆုရခဲ့ပါတယ္။
( ၂၀၂၀ / ၂၁ ) မွာလည္း မန္စီးတီးဂိုးသမားက ေ႐ႊလက္အိတ္ရျပန္ပါတယ္။
– ( ၂၀၁၁ / ၁၂ ) မွာ မက္ဆီက လာလီဂါ သြင္းဂိုးအမ်ားဆုံးျဖစ္ပါတယ္။
( ၂၀၂၀ /၂၁ ) မွာလည္း မက္ဆီက လာလီဂါရဲ႕ သြင္းဂိုးအမ်‌ားဆုံးပါ ။
– ( ၂၀၁၁ /၁၂ ) မွာ Dijonက လီဂူး ( ၁ )ကေန တန္းဆင္းခဲ့ရပါတယ္။
( ၂၀၂၀ /၂၁ ) မွာလည္း Dijon ဟာ လီဂူး ( ၁ ) ကေန တန္းဆင္းရျပန္ပါတယ္။
– ( ၂၀၁၁ /၁၂ ) မွာ ပီအက္ဂ်ီ ၊ လိုင္ယြန္ ႏွင့္ ရက္နက္တို႔က လီဂူး( ၁ )ရဲ႕ အဆင့္ ( ၂ ) ၊ ( ၄ ) ႏွင့္ ( ၆ ) ရရွိပါတယ္။
( ၂၀၂၀/၂၁ ) မွာလည္း ပီအက္ဂ်ီ ၊ လိုင္ယြန္ ႏွင့္ ရက္နက္တို႔က လီဂူး( ၁ )ရဲ႕ အဆင့္ ( ၂ ) ၊ ( ၄ ) ႏွင့္ ( ၆ ) ရရွိပါတယ္။
– အဂြဲ႐ိုးရဲ႕ မန္စီးတီး ပထမ ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးရာသီမွာ သူတို႔က ပရီးမီးယားလိဂ္ ခ်န္ပီယံျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
အဂြဲ႐ိုး မန္စီးတီးမေရာက္ခင္ႏွစ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခ်န္ပီယံျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ဒါဆို အဂြဲ႐ိုး ထြက္ခြာသြားၿပီး ေနာက္တစ္ရာသီမွာ‌ေရာ ?
– ခ်ဲလ္ဆီးက ( ၂၀၁၁ /၁၂ ) ေဘာလုံးရာသီအလယ္မွာ နည္းျပကို ထုတ္ပယ္ခဲ့တယ္။
( ၂၀၂၀ /၂၁ ) ေဘာလုံးရာသီအလယ္မွာလည္း နည္းျပကို ထုတ္ပယ္ခဲ့ပါတယ္။
မက်ဂွားယား အင်္ဂလန်အသင်းမှာပါတာကို သဘောမကျတဲ့ ဖာဒီနန်
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်၊ ဘာစီလိုနာနှင့် ဂျူဗင်တပ်စ်တို့ ချန်ပီယံလိဂ်ကနေ ထုတ်ပယ်ခံရတော့မှာလား..